Olee Otú Ndịàmà Jehova Si Eme Ka Ụlọ Nzukọ Alaeze Ha Na-adị Mma n’Anya?
Ebe ọ bụ na Ụlọ Nzukọ Alaeze bụ ebe anyị na-anọ efe Jehova, anyị kwesịrị ime ka ọ dị ọcha, dịkwa mma n’anya. Anyị kwesịkwara ịrụzi ihe ọ bụla mebiri na ya n’ihi na ọ bụ otu n’ime ụzọ dị mkpa anyị si efe Chineke. Anyị ekwesịghị iji ọrụ a gwuo egwu. Onye ọ bụla kwesịkwara iso na-arụ ya.
A gbasaa ọmụmụ ihe, nye aka mee ka ebe niile dị ọcha. A gbasaa ọmụmụ ihe n’ụbọchị ọ bụla, ụmụnna na-eji obi ụtọ nye aka zachaa Ụlọ Nzukọ Alaeze. Otu ugbo n’ọnwa, ọgbakọ na-abịakwa dewe ya ọcha. Ọ bụ okenye ma ọ bụ ohu na-eje ozi ga-ahụ maka ọrụ a ga-arụ n’ụbọchị ahụ. Ọ ga-ahụ na e mere ihe niile e kwesịrị ime. Ụfọdụ ga-aza Ụlọ Nzukọ Alaeze, ụfọdụ ejiri ákwà hichasịa ala ya, ụfọdụ ehichasịa oche ma hazie ha. E nwekwara ndị ga-eji ncha saa ebe a na-anyụ mamịrị ma wụọ ya ọgwụ na-egbu nje. A na-agwakwa ụfọdụ ka ha hichasịa windo na enyo, ndị ọzọ ekpofuo ahịhịa ma ọ bụkwanụ wepụsịa ọnyà ududo. A na-ewepụtakwa otu ụbọchị n’afọ ọ bụla, jiri ya hichaa Ụlọ Nzukọ Alaeze ma rụzie ihe niile e kwesịrị ịrụzi. Mgbe ọ bụla a ga-arụ ọrụ n’Ụlọ Nzukọ Alaeze, ụmụ anyị na-eso anyị aga arụ ọrụ. Nke a na-eme ka ha mata na ebe ahụ bụ ebe a na-efe Chineke, ọ bụghị ebe a na-egwu egwu.​—⁠Ekliziastis 5:⁠1.
Nye aka rụzie ihe ndị e kwesịrị ịrụzi. N’afọ ọ bụla, a na-enwe ndị a na-eziga ka ha gaa lee otú Ụlọ Nzukọ Alaeze niile e nwere dị. Ha lechaa, ha agwa ọgbakọ na-anọ na ya amụ ihe ihe ha kwesịrị ime ka ọ na-adị mma n’anya. Nke a na-eme ka ha ghara ịna-emefusị ego ha ga-eji mee ihe ọzọ. (2 Ihe E Mere 24:13; 34:10) Ebe anyị na-anọ efe Jehova kwesịrị ịbụ ebe dị ọcha ma dị mma n’anya. Ọ bụrụ na anyị niile enye aka na-edewe ya ọcha, anyị na-egosi na anyị ejighị ya egwu egwu. O gosikwara na anyị hụrụ Jehova n’anya. (Abụ Ọma 122:⁠1) Ọ na-enyekwa anyị aha ọma n’obodo anyị.​—⁠2 Ndị Kọrịnt 6:⁠3.
Gịnị mere anyị ekwesịghị ileghara Ụlọ Nzukọ Alaeze anyị anya?
Olee ihe anyị na-eme iji hụ na Ụlọ Nzukọ Alaeze anyị dị ọcha?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Olee Ihe Anyị Ga-eme Ka Ụlọ Nzukọ Alaeze Anyị Na-adị Mma n’Anya?
Olee Otú Ndịàmà Jehova Si Eme Ka Ụlọ Nzukọ Alaeze Ha Na-adị Mma n’Anya